नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको निर्वाचन, डनवाद कि धनवाद ? | Citizen Post News
काठमाडौं । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको ११ औं महाधिवेशन तथा २० औं साधारणसभा असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने निश्चित भएसँगै ब्यवसायीबीच उम्मेदवारी दिने होडबाजी सुरु भएको छ । निर्वाचनमा ब्यवसायीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नेक्रम जारी रहेको छ । त्यसो त, आ-आफ्नो गुटउपगुट बनाउन पनि ब्यवसायी प्रयासरत छन् । बाम गठबन्धनबाट करिबकरिब उम्मेदवार चयन भइसकेको अबस्था छ भने लोकतान्त्रिक खेमाबाट उम्मेदवारको चिनोफानो गरिएको छैन् ।
नेपाली काँग्रेस निकट मानिएका ५ जना ब्यवसायीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै काँग्रेसी उम्मेदवार हारको उपच काँग्रेसी उम्मेदवार नै हुने संभावना देखिएको छ । उनीहरुलाई मिलाउन नसकेको खण्डमा बामगठबन्धनका एक्ला उम्मेदवारको जित सुनिश्चित हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म अध्यक्ष पदका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
घोषणा गर्नेमा बर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ (विशाल एण्ड विराट), पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचन (यूनाईटेड विल्डर्स), रामशरण देउजा, यज्ञध्वज कार्की (स्काई विल्डर्स), रवि सिंह (महादेव खिम्ती) र होमनाथ कोइराला (विकोई विल्डर्स) रहेका छन् । जसमध्ये सिंह, कार्की, कोइराला र देउजाले एकैपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । यज्ञध्वज कार्कीबाहेक सवै ब्यवसायी नेपाली काँगे्रस निकट रहेका छन् भने बामगठबन्धनबाट अहिलेसम्म एक्ला उम्मेदवारका रुपमा ब्यवसायी कार्कीलाई अघि सारिएको छ ।
यसो भन्छन् अध्यक्षका प्रत्यासीः
अध्यक्षका प्रत्यासी ब्यससायी सिंहले भने,‘जसको नेतृत्व, उसैको नीति’ भन्ने नारा लिएर अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु । ठूला ब्यवसायी र साना निर्माण ब्यवसायीबीच रहेको खाडललाई पुर्नका लागि म नेतृत्वमा आउन चाहेको हुँ ।’ सिंहसँग केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्धितिय उपाध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।
महासंघका बर्तमान महासचिव देउजाले भने समयमा र गुणस्तरयुक्त निर्माणका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए । उनले भने,‘यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु । नेतृत्वमा नपुगेको स्थितिमा नीति भएर मात्रै हुँदैन रहेछ । त्यसैले मसँग भएको नीतलाई नेतृत्वमा पुगेर कार्यान्वय गर्ने सोच छ ।’
त्यस्तै, अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी हुमनाथ कोइरालाले आफूसँग भिजन, मिशन र एक्सन रहेको भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । उनले भने,‘सवैलाई काम, सवैलाई माम हुनुपर्छ, ठूला र साना निर्माण ब्यवसायीबीच्को दुरीलाई मेटाउन र बैज्ञानिक प्रणाली अनुसार काम पाउने आधार तयार पार्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।’
त्यसैगरी, बाम गठबन्धनबाट एक्लो उम्मेदवार हुने संकेत पाएपछि उम्मेदवारी घोषणा गरेका यज्ञध्वज कार्कीले नेतृत्व खड्कीएको भन्दै आफुले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । उनले भने,‘मसँग २०६५ देखि ०६८ सम्म अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव छ । २८ बर्षसम्मको मेरो अनुभवलाई फेरि पनि यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न, निर्माणका कामलाई पारदर्शी बनाउन र सांगठनिक सुधार गर्नेलगायतका काम गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।’ अनुभवि नेतृत्व, युवाको साथ भन्ने नारा लिएर आफू चुनावी मैदानमा उत्रेको उनले बताए ।
पूर्वअध्यक्ष हिराचन र बर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठको उम्मेदवारीले पनि निकै अर्थ राख्छ । नेपाली काँग्रेसले कसलाई आधिकारिक टिकट दिने हो ? त्यसको छिनोफानो आजै हुने बताइएको छ । यद्यपि, नेतृत्वमा कसलाई पुर्याउने र कसलाई नपुर्याउने भन्ने कुरामा बर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ र बर्तमान उपाध्यक्ष पेम्बा लामाको निकै ठूलो भूमिका रहने ब्यवसायीबीच चर्चा छ ।
त्यसैगरी, महासचिव पदका लागि अहिलेसम्म ब्यवसायी दिपक गौतमको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । उनको कम्पनी निकै विवादास्पद रहेको छ । राजधानीमा दिनदाहडै हत्या गरिएका पूर्वअध्यक्ष शरद गौचन समूहका गौतमको गजुरमुखि कम्पनी प्रहरी ईन्काउण्टरमा मारिएका गुण्डा कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटेको पनि सेयर भएको भन्दै खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
यहि समूहले विगतमा काम हत्याउनका लागि सबैभन्दा बढि गुण्डाको प्रयोग गर्ने गरेको थियो । ठेक्का कार्टेलिङको सुत्रधार नै गौतमलाई मानिन्छ । ब्यवसायी गौतमले नै रेल वे विभागको पहिलो ठेक्का (बर्दीबास खण्ड) कार्टेलिङ गरेर सिमित ब्यवसायीले मात्र ठेक्का दिलाएका थिए । ८ प्याकेजमा लिएको उक्त काम करिब ४ अर्ब बराबरको थियो । त्यसैगरी, अहिले पनि ईलाम, झापा, जनकपुर, नेपालगञ्ज, विरगञ्ज, विराटनगरका शहरी सडकहरुका काम स–साना प्याकेजमा बनाएर आफूअनुकुल उनले काम लिन सफल भएका ब्यवसायीबीच चर्चा छ ।
गौतमलाई काँग्रेसको सहयोग र समर्थन रहेको छ । ठेकेदार गौतमले भने आफुसँग देश विदेशमा काम गरेको अनुभव रहेकाले महासचिव पदका लागि आफु एक मात्र योग्य उम्मेदवार भएको बताए । उनले भने,‘यो क्षेत्रमा आफूसँग २४ बर्ष काम गरको अनुभवे छ । मेरो निर्माण कम्पनीलाई मान्छेहरुले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै हिसावले चर्चा गर्छन् । तर महासंघमै पनि एक कार्यकालको अनुभव बटुलिसकेकाले महासचिवका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेको हुँ ।’
नेपाल प्रहरीले ठेकेदारहरुका कारण पनि गुण्डागर्दी बढेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ठेक्कापट्टामा गुण्डाहरुलाई अनाधिकृत रुपमा गुण्डाहरुलाई प्रवेश गराएकै कारण ब्यवसायी गौचनको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो । तर अब हुने निर्वाचनपछि ठेक्कापट्टामा डनवाद र धनवाद भन्दा गुणस्तर कामले प्राथमिकता पाउने उम्मेदवारहरुको भनाई छ । ठेक्का पट्टामा डनवाद र धनवाद विस्तारै सेलाउने ब्यवसायीले विश्वास लिएका छन् । कारण–घर वा कार्यालयमै बसेर ई–विडिङमार्फत टेण्डर भर्न सकिने सुविधा आजभोली थपिएको छ ।
प्रहरीले गुण्डा नाईके दिनेश अधिकारी उर्फ ‘चरी’, कुमार श्रेष्ठ उर्फ ‘घैंटे’लगायतको ईन्काउण्टर गरेपछि ठेक्कापट्टामा गुण्डाहरुको चुरुफुरी कम भएको हो । नत्र जुन ठेक्कामा पनि ठेकेदारले कमिशन नदिई काम गर्न सक्ने अबस्था थिएन । ब्यवसायी गौचनको हत्या काण्डमा मनोज पुनलगायतको पनि प्रहरीले ईन्काउण्टर गरिसकेको छ ।
मुख्य योजनाकार समिर बस्नेतलाई भने पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ, त्यो पनि प्रहरीकै योजनामा बस्नेतलाई बचाइएको आरोप छ । त्यसपछि पनि नाम चलेका गुण्डालाई प्रहरीले ईन्काउण्टर गर्न खोज्यो तर सफल हुन सकेन । आजभोली पहिलाको जस्तो ठेक्कापट्टामा गुण्डागर्दी नहुने भएता पनि सम्पूर्ण खर्चका लागि भन्दै अनिवार्य ५ प्रतिशत रकम ब्यवसायीले बाँड्ने गरेका छन् । त्यसमा नाम चलेका गुण्डाले पनि भाग पाउँछन् ।
यसरी हुन्थ्यो मौखिक आदेशमा ठेक्कापट्टाः
पञ्चे र राणाका पालामा हुकुमीप्रथाबाट ठेक्कापट्टा दिने चलन थियो । ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशित गर्दै टेण्डरमार्फत दिने चलन प्रजातन्त्र आएपछि मात्र सुरु भएको हो । प्रजातन्त्र आउनुपूर्व प्रशासकले आफूले चाहेको, रोजेको मान्छेलाई मौखिक भरमा ठेक्का दिने गर्थे ।
२०४७ सालमा नेपाल निर्माण ब्यवसायी संघ २०५४ सालमा गएर नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघमा परिवर्तन भयो । त्यसपछि तोकआदेशमा ठेक्का दिने परम्परा तोडिदै ब्यवसायीबीच तीब्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने चलनको ब्यापाक विस्तार भएको ब्यवसायीहरुको भनाई छ ।